Isbedelka Dabaysha Geeska Afrika – JAMHURIYADDA
August 6, 2018 October 23, 2018 jamhuriyadda
Isbedelka Dabaysha Geeska Afrika
Geeska Afrika, waxaa ka dhacaya dabayl barwaaqo iyo diihaal wada sidata. Juqraafi ahaan “Geeska” waxaa leysku yiraah waddamada Eritrea, Itoobiya, Jabuuti, Soomaaliya, Suudaan iyo Koofur Suudaan, iyadoo Kenya iyo Ugandha ay aad isugu dhow yihiin.
Cajiib waxaa ah, in dadka degaankaas aysan isku aqoon reer “Geeska Afrika.” Haddana, gobolku wuxuu leeyahay dhaqan iyo taariikh isla xiriirta, inkastoo sidoo kale ay jiraan kala duwanaan u gaar ah dal walba.
Su’aashu waxey tahay, dabaysha cusub ee Geeska Afrika, ma bedeli kartaa xaaladda gobolka ee ku salaysan colaad, xuriyodoon iyo saboolnimo?
Ma sahlana meel laga bilaabo, waayo gobolku waa meel caqabadihii horey ee gumeysigii iyo kuwa cusub ee dagaalka qabow iyo kan xag-jirka, ay isugu yimaadaan. Weliba, jaha-wareer wuxuu ka taagan yahay, amniga iyo badbaadada khayraadka dhulka, Badweynta Hindiya, Badda Cas, mariinka Bab al-Mandab, iyo biyaha Wabiga Nile.
Itoobiya waxey ku guuleysatay 1991kii, inay dhaqan gelisay ismaamul-qowmiyadeed (9 dowlad-goboleed iyo 2 magaalo oo madax-banaan). Walow, ay dhinac martay dimoqraadiyada, kuna xadgudubtay xuquuqda aadanaha, haddana waxey hirgelisay dhaqaale lixaad-leh.
Afwerki iyo Aby Axmed
Si kastaba ha ahaate, heeshiiska Itoobiya iyo Eriterea wuxuu sidaa rajo, inkastoo gobolka uu kala kulmay fal-celin isku dhafan (ileen farxadi waa naxdin).
Wargeyska “Standard – 24/07/2018,” ayaa isbedelka cusub ku tilmaamay inuu xanuun ku noqon doono ciyaartoyda Kenya “Safaricom iyo KCG Group” oo ku haminayey suuqa Itoobiya.
Saadaashu waxey tahay, in kaabayaasha isku xiri lahaa Kenya (dekedda Lamu), Koofurta Suudaan iyo Itoobiya ay muhiimad beelayaan. Juba (K. Suudaan) oo la filayey in gooni u istaagii (2011) ku barwaaqoobi doonto, ayaa ilaa hadda isku khilaafsan wadaaga awoodda iyo khayraadka dalka.
Afwerki (midig), Farmajo (bidix)
Dhinaca kale, heshiisku wuxuu abuuray marxalad cusub oo nabadeed. Go’aanka Madaxweyne Isaaias Afwerki uu ku martiqaaday Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed – Farmaajo, wuxuu calaamad u yahay horumarka nabadda Geeska Afrika.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, António Guterres, ayaa sheegay in dib u soo celinta xiriirka Itoobiya iyo Eriterea uu “muujinayo dabayl cusub oo rajo leh, inay ku baahi-doonto Afrika,” (Guardian – 9/07/2018).
Bronwyn Bruton, oo hoggaamiya diblomaasiyadda aan rasmiga ahayn, ee horumarinta xiriirka Washington iyo Casmara, ayaa ugu baaqay Qaramada Midoobay in ay Eritrea ka qaadaan cunaqabatayntii hubka (The NewYorker – 02/08/2018).
Doodaha naqdinaya heshiiska, waxey leeyihin nabadda waxey fursad dhaqaale siin doonto Eriterea, mid saldhig Washington, oo ciriiri ku qabta ciidamada Shiineyska, iyo mid guul argudasho Dubai. Hase yeeshee, waxaan shaki ku jirin in Jabuuti ay daremi doonto qaran-juufada (qanjirada) haba yaraatee.
Sanadihii la soo dhaafay, Jabuuti waxey horyaal ku ahayd, xasilloonida siyaasadda, kabayaasha horumarsan iyo jawiga ku habboon maalgashiga. Jabuuti waxey martigelisaa awooddo tartamaya ciidamadooda sida Mareykanka, Shiinaha, Fransiiska, Jabaanka, Jarmalka, Talyaaniga iyo Sacuudiga.
Dadaalada isdhexgalka dhaqaalaha (economic integration) ee Addis Ababa iyo Jabuuti ay horseedka u yihiin, kuwo lagu ballaarinayo ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay, lala gaaray Kenya, Soomaaliya iyo Sudan.
Walow, khilaafadka iyo xasilooni darrada amniga ay xadidayaan la macaamilka gobolka, haddana dunidu iskama indha tiri karto muhiimadda juquraafiyadeed ee mandiqada u leedahay mariinka ganacsiga caalamka.
Ma aha wax la yaab leh, in iska soo horjeedka Gacanka Carbeed uu saameyn ku yeeshay gobolka. Geeska wuxuu la wadaagaa Jasiirada Carabta taariikh iyo xiriir dhaqan-dhaqaale soo jireen ah.
Waxaa muran ka jiraa, sidii leeysku waafijin lahaa xiriirka siyaasadda Geeska Afrika iyo kan Xulufada Sacuudiga, haddii aan labada dhinac laga helin siyaasad maskax furan.
Casmara iyo Addis Ababa waxey xiriir dhow la leeyihiin Imaaraadka, halka Jabuuti, Khartoum iyo Muqdisha xiriirkoodu uu aad u liito. Masar waxey bilowday inay tarxiisho qaxootiga Soomaalida, ciidamo geyso xuduuda Suudaan (Sawa-Eriterea) ayadoo hugan magaca xulufada afarta, taas oo walaac gelisay gobolka (Oriental Review 01/2018).
Taxadar waxaa u baahan, siyaasadda fara-gelinta Imaaraadka, oo ku wajahan ka faa’iideysiga xasilooni darrada guddaha dalka, si ay u kala qaybiso ummadda Soomaaliyeed (Alarabia 19/03/2018). Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midowbey ayaa ku eedeeyay Imaaraadka inay “gebi ahaan jebiyeen sharuucda caalamka,” kuna “xad-gudubeen qaranimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliya,” (AlJaziira 03/18/2018).
Alexander Rondos, oo Midowga Yurub waakiilka uga ahaa Geeska Afrika, ayaa asagoo falanqeynayo arrimaha gobolka yiri, “Kuwa ula dhaqma [Soomaaliya] iyada oo aan loo daneynayn, waxay maalin bixin doonaan qiimaha ay dayacaan; halka kuwa isku dayaya in ay ku ciyaaran (manipulate) heli doonaan in farahooda ay gubtaan,” (Center for International Relations and Sustainable Development – 2016)
Horaantii 2018ka, Dowladda Federalka Soomaaliya, oo diidan ciidameynta iyo boobka dekedda Berbera, ayaa dacwo ka dhan ah Dowladda Imaaraadka horgeysay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midowbey.
Imaaraaka wuxuu saldhi ciidamadeed ku leeyahay Casmara oo uu kaga duulo Yemen. Warbixin ay qortay “Arab Center – Washington DC – 09/03/2018,” ayaa sheegeysa inuu wato qorshe ujeedadiisu tahay inuu kala qaybiyo Yemen, si uu u qabsado koofurta iyo “Bab al-Mandab.”
February 2018ka, Jabuuti waxey dib ula noqotay heshiiskii ay la laheyd Dubai Port. Sideedba, “Imaaraadka ma doonayaan in mandiqada ay ka dhalato dekad baaxad leh oo la tartami karta tan Jabal Cali,” ayuu Madaxweyne Ismaciil Cumar Geelle ku yiri warbaahinta.
Taas waxaa akidaya, in Juun 2012kii Yemen ay dib uga noqotay heshiiskii DP World ee 2008kii. Sida uu qoray “Financial Times – 12/09/2012,” dhaqdhaqaaqi dekedda Cadan oo ahayd 500,000 (20 feet unit container) heshiiska ka hor, ayaa hoos u dhacay ilaa 140,000 uu gaaro 2011kii.
Turkigu wuxuu goor hore arkay muhiimadda Geeska Afrika, wuxuuna kula dhaqmaa xiriir ku salaysan kalsooni iyo is-ixtiraamid, inkastoo uu faa’iido doon yahay. Sidaas oo ay tahay, ayuu xiriir wanaagsan la leeyahay awoodaha ugu waa weyn addunka ee kula tartamaya maalgashiga Afrika.
Suudaan rubac qarnigii la soo dhaafay, waxey ku jirtay mashaakil siyaasadeed oo isu rogay colaad qowmiyadeed iyo tafaraaruq. Inkastoo, muhiimadda Qadar ay aad u soo ifbaxday colaadii Darfuur kadib, haddana waxey bedeshay maalgashigii dekeddaha, ayada gelin doonta 4 biylan doolar Sukaan (Suudaan). Halka Turkiga lagaa filayo inuu geliyo 750 malyan doolar oo maalgelin ah. Dekedda iyo tareenka isku xiri doono Addis Ababa iyo Khartoum waxey door weyn ka qaadan doonaan kobcinta dhaqaalaha gobolka.
Xuriyadii (1993) kadib, Madaxweyne Afwerki wuxuu qaaday tubtii kali taliska Mengistu Haile Mariam iyo Jen. Maxamed Siyaad Barre. Diidmada Eriterea dhex-dhexaadinta, waxey tilmaan u tahay in labada dalba ay si xoog leh ugu lug leeyihiin cayaaraha xintanka shisheeyaha ee “geopolitical rivalry.”
Colaadda Itoobiya iyo Jabuuti ka sokow, Eriterea waxey qeyb ka tahay fidnada Geeska Afrika, khaas ahaan tan Soomaaliya (New York Times 22/06/2018). Ka dib markii lagu soo eedeyey inay gacan siiso argagixisada, ayaa bishii Deshember 2009kii, Qaramada Midowday ku soo rogtay cunaqabateen.
Inkastoo Soomaalida, qoomiyad khur ah ay kasoo jeedo, haddana dhaqankii reer-guuraaga kama badbaadin dagaal sokeye. Dalka waxaa luqunta ugu jira fidno ay ka dambeyaan awoodo shisheeye, oo mid kasta ajenda u gaar ah leeyahay.
Sidaas darteed, heshiiska Eriterea iyo Soomaaliya, wuxuu ka tarjumayaa sida siyaasadda gobolka isku bedeshay tan iyo markii Ra’iisul-wasaare Aby Axmed uu u fidiyey Eriterea nabad iyo iskaashi.
Aragtidaas tu la mid ah, ayaa siyaasadda dibedda Soomaaliya lagu haggayaa si loo saxo khaladaadkii hore, gobolkuna uu u wada helo nabad iyo noolal. Taas ayaa ku jirtaa danta qaranka Soomaaliyeed iyo tan gobolka.
Itoobiya waxey xiriir dhow la leedahay Maraykanka dhanka dagaalka xag-jirka, Midowga Yurub dhanka socdaalka-qaxootiga, iyo Shiinaha dhanka horumarinta ganacsiga iyo kaabayaasha, sida uu qoray wargeyska “Wall Street Journal – July 9, 2018.” Dhanka kale, Itoobiya waxey maalgelin toos ah ka heshaa dalalka reer-Galbeedka, kuwa Bariga Dhexe iyo Fogba.
Walow kalsoonidii Jabuuti iyo Soomaaliya laga yaabo inay mugdi gasho, haddana taariikhda xiriirka dhow ee laba-geesoodka ah, wuxuu galaa waqtiyo kala duwan. Waxaase nasiib darro ah, in Safiirka Jabuuti ee Muqdisha uu suuqa ku naadiyo arrin ku habooneyd in labada dowladda ay si hoose uga xaajoondaan. Filic kaasi miyuusan u ekeen kii dagaal ogoshaahii (Wordlords)!?!
Hadda ka hore, ayaa laba nin oo reer Bakool ah hashoodii libaax ka qaaday goor fiid ah. Waxey baadi-goobaanba, ninkii raga ugu horeyay ayaa goor barqadi ah, wuxuu arkey libaaxii oo geed harsanaya. Naxdin awgeed, ayuu jilbaha dhulka ku dhuftay.
Kii kale ayaa soo dul joogsaday ninkii oo dhulka jilbaha ku haaya. Isla markiiba waxaa hortiisa uga muuqday libaaxii oo indha ku cadeynaya. Intuu barkagay (naxay), ayuu taabtay ninkii asagoo leh “war libaaxii raadkiisa ma aragtay.” Markii uu dhowr jeer ku cel-celiyey, ayuu ninkii u jawaabey oo uu yiri, “war maxaad ka rabtaa libaaxa raadkiisa, waaba kaasoo horjeedaabe!?!!
Hadda iyo dan, Jabuuti waxey u baahan tahay inay fahamto isbeddellada ku hareeraysan, lana timaad siyaasad ay kula dhaqanto asxaabta iyo nacabkaba, oo u horseeda nabad joogta ah.
Waxaa ku waajibey Dowladda Soomaaliya, inay raadiso waddo diblumaasiyadeed oo lagu dejin karo khilaafka degaanka “Ras Doumeira.” Taas ayaa wax tar u leh geedi-socodka nabadda Geeska Afrika, oo abuuri kara dhaqdhaqaaq dhaqaale lagu wada barwaaqoobo. Ileen farxadi waa naxdin!
CabdulQadir Cariif Qaasim
Arrimaha Geeska Afrika
Previous Soomaaliya Deyn Cafiskii Ma Gaartay
Next Dhibaatada Sicir Bararka Dalka
Qoobka Ka Ciyaarka Soomaaliya iyo Somaliland – JAMHURIYADDA says:
[…] kale, Geeska Afrika ayaa u muuqda in uu u jiheysanayo nidaamka iskaashiga (Jamhuriyadda), kol haddii awoodaha caalamika ay ku tartamayaan. Guddoomiyihii hore ee Golaha Wakiillada […]
Qoobka Ka Ciyaarka Soomaaliya iyo Somaliland | Somalisan.com kala soco wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya says:
[…] yahay nidaamka iskaashiga ganacsiga iyo amniga, kol haddii awoodaha caalamika ay ku tartamayaan (Jamhuriyadda). Guddoomiyihii hore ee Golaha Wakiillada Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdullahi Maxamed “Cirro” […]
Fiiro Gaar ah u Yeelo – Iskaashiga Japan iyo Afrika – JAMHURIYADDA says:
[…] su’aal dhalisay, in fadhiga gaarka ahaa ee looga hadlayay nabadda iyo xasilloonida Geeska Afrika, ay si wadajir ah u guddoomineyn Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi – […]
Marwo Monica Juma Goorma Ayay Qaladaadkeedii Hore Wax Ka Baran – JAMHURIYADDA says:
[…] Afrika waxaa saameeyey isbdelo isdabajoog ah, ka dib markii mugdi siyaasadeed iyo xasillooni la’aan muddo dheer hareeraysay. […]
Marwo Monica Juma Goorma Ayay Qaladaadkeedii Hore Wax Ka Baran ? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida says:
[…] Afrika waxaa saameeyey isbeddello isdabajoog ah, ka dib markii mugdi siyaasadeed iyo xasillooni la’aan muddo dheer hareeraysay. Somaaliyana […]
Marwo Monica Juma Goorma Ayay Qaladaadkeedii Hore Wax Ka Baran ? | Xulka Wararka oo dhan says:
Faallo: Kenya Maxaa Ka Raacay IGAD! – JAMHURIYADDA says:
[…] kastaba ha ahaate, iskaashiga seddax geesoodka ah iyo jawiga Geeska Afrika oo isbedelay ayaa Soomaaliya u saamaxay inay gaarto marxalad tala […]
Dr. Aby Axmed Ma Ka Badbaadin Karaa Itoobiya Inay u Kala Daadato Sida Tusbax Go’ay? – JAMHURIYADDA says:
[…] Itoobiya iyo Eritrea ka hor.Hagaajinta xiriirka Itoobiya iyo Eritrea waxay gobolka ka abuurtay jawi nabadeed, kaas oo suurtaggeliyay saddex arrimood: (1) In kooxaha mucaaradka Itoobiya fariisimada ku lahaa […]
Ra’isul Wasaare Abiy Axmed oo xaalad adag oo siyaasadeed xiligan Wajahaya | Xulka Wararka oo dhan says:
[…] xiriirka Itoobiya iyo Eritrea waxay gobolka ka abuurtay jawi nabadeed, kaas oo suurtaggeliyay saddex arrimood: (1) In kooxaha mucaaradka Itoobiya fariisimada ku lahaa […]
Ra’isul Wasaare Abiy Axmed oo xaalad adag oo siyaasadeed xiligan Wajahaya | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida says:
Leave a Reply to Qoobka Ka Ciyaarka Soomaaliya iyo Somaliland – JAMHURIYADDA Cancel reply
NAIROBI – Dhoofka khaat Soomaaliya loo dir oo 21.51% hoos uga dhacay heerkii sanadkii tegay.
HARGEYSA – Xildhib. Cabdulqaadir Jirde oo sheegay in Farmaajo aan loo heysan karin xadgudubkii dowladdii Siyaad Barre.
MUQDISHO – DFS oo la sheegay in bil walba ay ka aruuriyo khaatka ku soo dega garoonka Aadan Cadde canshuur dhan ilaa $.3 malyan.
MUQDISHO – Madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamud oo soo dhaweyay Bixii oo ogolaaday Farmaajo cudurdaarkiisii.
HARGEYSA – Orodada marathonka 2020 oo ka furmay Hargeysa.
Kaydka Select Month February 2020 (6) January 2020 (9) December 2019 (12) November 2019 (10) October 2019 (16) September 2019 (14) August 2019 (15) July 2019 (17) June 2019 (15) May 2019 (15) April 2019 (11) March 2019 (9) February 2019 (8) January 2019 (7) December 2018 (5) November 2018 (5) October 2018 (5) September 2018 (2) August 2018 (4) July 2018 (2) June 2018 (1) May 2018 (2) April 2018 (1) February 2018 (1) January 2018 (2) December 2017 (5) November 2017 (4) October 2017 (1)
Arrimaha Amniga (5)
Arrimaha Bulshada (30)
Arrimaha Dhaqaalaha (32)
Arrimaha Geeska Afrika (25)
Arrimaha Siyaasada (72)
Ciyaaraha iyo Dhaqanka (11)
Dib U Eegis Buug (17)
Faallada Tafaftirka (8)
Follow JAMHURIYADDA on WordPress.com